Ndeapi marudzi ePit bull | Imbwa Nyika
Chii chinonzi Pit bull nzudzi
Imbwa dzegomba imbwa mhuka dzinozivikanwa, nechitarisiko chakapfava uye mhasuru dzakasimba. Hunhu hwavanazvo, kunyangwe izvo zvichiri kutendwa, zvakakwana kumhuri zhinji, kubvira vane hushamwari, vakadzikama uye vanokwanisa kuwirirana chaizvo nevana.
Nekudaro, isu tinofanirwa kuziva kuti kune imbwa dzinoverengeka dzinozivikanwa neshoko iro. Iwe unoda kuziva here kuti ndeapi Pit pit mhuru? Usapotsa ichi chinyorwa. 🙂
6 Monster bhuruu
10 Mhino tsvuku
Ndirwo rudzi runonyanya kuzivikanwa. Kubva mairi, akasiyana typologies akagadzirwa. Idzo imbwa dzakangwara kwazvo, dzinogara dzakagadzirira kudzidza zvinhu zvitsva. Chii chimwe, Ivo vane hushamwari uye vanomira kuve nehunhu hwakaenzana. Zvinorema pakati pe13 kusvika 25kg.
Ivo vanozivikanwa nekuve neyakaomesana, ine mhasuru uye yakasimba muviri. Ivo vakaita senzvimbo nedzimwe imbwa, asi hapana chinhu icho nzira yakanaka yekudzidzira (ine mibairo, uye kwete nekupopota kana chisimba) isingakwanise kugadzirisa. Vanotaridzika nehungwaru hwavo uye chishuwo chavo chekuda nekunzwa kudiwa. Zvinorema pakati pegumi nemana negumi nemanomwe.
Ivo vane mhasuru. Asi, usanyengerwe nechitarisiko chayo: vane rudo rukuru uye vakadzikama kwazvo; ehe, ivo vanodikanwa, senzombe dzese dzegomba, ita yakawanda yekurovedza muviri. Ivo vanogona kuyera 35kg.
Icho chibereko chinotyisa kwazvo chembwa, ine musoro wakareba. Maziso ake anoratidza kutarisa kunobata. Ivo vane rudo kwazvo uye vakashinga. Ivo vanogona kusvika 35kg muhuremu.
Mufananidzo - Mastiposde.com
Idzo imbwa dzine mhasuru dzakasimukira kwazvo. Musoro waro wakawedzera kana kutenderera, uine maziso mashoma. Vakave nepamuviri pekurwa imbwa, kunyangwe nhasi zvichizivikanwa izvo hunhu hwembwa zvinoenderana, kwete chete pamageneti avo, asiwo uye pamusoro pezvose pamusoro pekuti vakadzidza sei. Vanogona kuyera pakati pe35 uye 40kg.
Mufananidzo - Razasperrospitbull.wordpress.com
Iwo michinjikwa pakati peNeapolitan Mastiff naDogue de Bordeaux, saka vane simba rakakura mushaya. Bumbiro rayo rakakora uye rinorema. Iwo ndeimwe yemakomba emombe ane huremu hwepamusoro hwemuviri: muenzaniso wechikuru unogona kusvika 60kg.
Ivo vanozivikanwa nekuve neyakaenzana hunhu. Vanogona kuve shamwari dzepedyo dzevanasezvo ivo vane moyo murefu. Ivo vane hupamhi, hwakasimba musoro uye wakapfava mhino. Kurema kwayo kuri 15-20kg.
Iyo inozivikanwa zvakare seMexico pit bull, ndiwo madiki. Idzo dzakatetepa asi imbwa dzine tsandanyama, idzo zvinosuruvarisa kushandiswa sembwa dzinorwa nekuda kwekudzivisa kwavo. Idzi imbwa dzinokurumidza kuvimba nevanhu, saka vanogona kuva shamwari dzakanaka kwazvo uye shamwari. Kurema kwayo kunenge 15-20kg.
Iwo maPull Bulls ayo anofungidzirwa kuti ane Dalmatia reropa, nekuti iwo mvere dzakachena chena nemavara matema. Ivo vane underdeveloped musculature, uye vakadzikama uye vane mutsa, kuitira kuti vagarisane zvakakwana nevanhu. Kurema kwayo kuri 20-25kg.
Huru yavo yakatsvukirira kana chena, iine huchi-ruvara kana maziso e green. Muviri wayo mutete, nemakumbo marefu. Zvinorema pakati pe25 kusvika 30kg.
Ivo vakafanana neRed Mhuno, kunze kweye yavo furati iyo chena isina mavara. Maziso akasviba kana bhuruu.
Ivo vakagadzirwa kubva kuRed Mhuno. Ivo imbwa dzine rakasimukira kwazvo, rakasimba uye rakadzikama muscular system iyo vanowirirana zvakanaka nevana nevakuru.
Idzo imbwa dzakaonda uye tsandanyama dzine hura dzinogona kuve dzakasviba kana brindle muvara. Yakave ichishandiswa sembwa yekuvhima. Ivo vanogona kuyera 30kg.
Vane kugona kukuru kwemitambo, uye kuvaka kwavo kwakaonda uye kune mhasuru. Zvinorema pakati pe25 kusvika 30kg. Ivo vakamboshandiswa sembwa dzinorwa.
Mufananidzo - Pinterest
Panyama, ivo vanoyeuchidza chaizvo mabulldogs. Ivo vane mhasuru uye vane makumbo akasimba. Vhudzi ravo bvudzi rakachena nebrown kana nhema matema, kana chena. Ivo akadzikama uye anononoka, asi zvakare akasimba. Ivo vanogona kuyera 40kg.
Ndeupi werudzi urwu wawakanyanya kufarira?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Imbwa dzinobereka » Chii chinonzi Pit bull nzudzi
Gloria Sanchez akadaro
Orale! Ini ndaisaziva kuti paive nemhando dzakasiyana dzerudzi urwu, pachezvangu, ndaifarira chaizvo iyo Stuffawler, ndaifunga kuti yaive Amstaff ... hehe
Kuti uite kuti chinyorwa chiwedzere, iwe waingoda kuenzanisira mamwe madzinza, zvisinei, zvinonakidza kwazvo.
Pindura Gloria Sánchez
Ehe, kune akati wandei 🙂
Pindura Monica Sánchez
iye Stuffawler ari wedzinza renzombe kupfuura rumwe rudzi rwembwa uye Johnson anonyanya kuve mastiff kupfuura nzombe terrier mune yakajeka kunze kweJohnsons, mamwe ese akafanana rudzi, chete mitsara kunze kwemastiff mwanakomana kune vamwe ane mhino dzakareba uye vamwe mhino ipfupi uye terrier senge yeBoston Terrier nevamwe
Pindura kune nzombe-terrier
Damn, kushomeka kweruzivo nezveAmerican Pit Bull Terrier kwakakura, tiri kuenda kunoona Staffordshire nzombe terrier, American Staffordshire terrier, uye nzombe terrier, havazi maPull Bulls, mamwe marudzi, iyo iri mu wekupedzisira pikicha ndeye bulldog yekuAmerican kubva kunaJohnson mutsara, iyo American neMexico Gomba zvakaenzana zvichienderana neropa, Colby mutsetse weropa, Red Mhuno rudzi rwePitbull iyo inosiyana chete neruvara rwe truffle (mhino) shava pachinzvimbo cheBlack, kwete nekuda kwebvudzi bvudzi, stuwfawler uye monster bhuruu maAmerican Bully anonamira, hapana chekuita naPit Bull, Gamers naPinat, ini handizive kuti wawana kupi marudzi aya uye Villa Liberty ndiro zita uye rinonamira. yemufudzi kubva kuMadrid, zvakadaro… ..
Nzira yekuchengeta imbwa ichangobva kuchinjika
Chii chakafanana nekatsi nembwa microchips senge?